Media Coverage – Colors Rainbow
LGBT is An Identity
IEC Materials Production
This Is What It’s Like To Be Gay Or Trans In Myanmar
admin Media Coverage July 14, 2016 September 21, 2016 LGBT Rights, Myanmar0Comment
COURTESY OF CHARLOTTE ENGLAND
PP* was waiting for her friends in the busy city of Mandalay onahot, humid evening in July 2013, when she was snatched from behind by plainclothes police officers and bundled into an unmarked vehicle.
admin Media Coverage July 14, 2016 July 14, 2016 LGBT Rights, Myanmar0Comment
Thein Sein, left, was pressed by David Cameron to improve Burma’s human rights record during their meeting in London Photo: EPA
A dozen gay men in Mandalay are alleged to have been stripped, beaten and abused by police who said they were performinga“public service” by detaining them. Read more
Myanmar’s transgender people not just chasing rainbows in fight for equality
admin Media Coverage July 14, 2016 July 14, 2016 Gender, LGBT Rights, Myanmar, Transgender0Comment
Photograph: Ye Aung Thu/ AFP/ Getty Images
Nat Nat Nwe was once arrested, stripped, beaten and held inacell for 14 days just because she tried to walk home alone at night. The quiet 40-year-old is convinced she was targeted because she is transgender. Read more
ထားဝယ်​မြို့တွင်​ပြုလုပ်​ကျင်းပ​သော TDoR အထိမ်းအမှတ်​ အခမ်းအနား​အောင်​မြင်​စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ..အကြမ်းဖက်​လုယက်​သတ်​ဖြတ်​ ခြင်းခံရပြီး ဒီအခမ်းအနားကို မတက်​​ရောက်​လိုက်​ရသည့်​ ​အောင်​သူ အတွက်​ LGBT များ. NGO ,CSOs, ပညာ​ရေး. နိုင်​ငံ​ရေး စတဲ့ နယ်​ပယ်​အသီးသီးမှ တက်​​ရောက်​ ပူး​ပေါင်းလာကြသူများနှင့်​အတူ Colors Rainbow အဖွဲ့ နှင့်​ Myanmar MSM Network တို့ အတူလက်​တွဲကာ ဆု​တောင်းပွဲကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြုလုပ်​​အောင်​မြင်​ခဲ့ပါပြီ..အားလုံးကို အထူးတင်​ရှိပါ​ကြောင်း မှတ်​တမ်းတင်​ဂုဏ်​ပြု အပ်​ပါသည်​. ... See MoreSee Less
စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သင်တန်းအတွက် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Colors Rainbow မှ LGBTများအတွက် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် စွန့်ဦးတီ ထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် သင်တန်းကို (၅)ရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Colors Rainbow မှကြီးမှုးပြီး Entrepreneurs Initiative Management Group ကိုတည်ထောင်သူ၊ ILO ရဲ့ Program တစ်ခုဖြစ်သော SIYB program မှ Master Trainer ၊ Freelance Business Development Services Provider တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာ ကျော်မင်းဦးမှ ဦးဆောင်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
• မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ LGBT များ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ထဲထဲဝင်ဝင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်။
• LGBT များကိုယ်တိုင် စီပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လည်ပတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ချဲ့ထွင်နိုင်စေရန်။
• စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုများ ရရှိစေရန်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အစပြုရန်အတွက် ပြင်ဆင်နေသူများ၊ တပိုင်တနိုင် စီးပွားလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင် နေသူများ အတွက် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁) လိင်စိတ်ကိုင်းညွှတ်မှုနှင့် လိင်ဝိသေသခံယူချက်၊ လိင်ဝိသေသဖော်ပြချက်များ အကြောင်း (Sexual Orientation & Gender Identity and Expression _SOGIE)
၂) သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လည်ပတ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း _ Generate Your Business (GYB)
၃) သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စတင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း _Start Your Business (SYB)
၄) သင့်စီးပွားရေးကို ဖွံ့ဖြို့တိုးတက် ချဲ့ထွင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း _ Improve Your Business (IYB)
• (၂၆) ရက်နေ့မှ (၃၀) ရက်နေ့အထိ၊နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
• ရန်ကုန်မြို့။ (သင်တန်းကျင်းပမည့် နေရာကို သင်တန်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူများအား ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးပါမယ်။)
• မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ Sexual Orientation and Gender Identity, Gender Expression အရ Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) များ ဖြစ်ရပါမယ်။
• အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၃၅ နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရပါမည်။
• ပညာအရည်အချင်းအားဖြင့် အနိမ့်ဆုံး အထက်တန်း ပညာ ဆည်းပူးလေ့လာပြီးသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
• သင်တန်းကို ရက်အပြည့် (၅)ရက်တိတိ မပျက်မကွက်တက်ရောက်နိုင်သောသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များနှင့် ပြည့်စုံသောသူများသည် သင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် လျှောက်ထားရာတွင် -
• အမည် (မှတ်ပုံတင် အမည်)
• Sexual Orientation (လိင်စိတ်ကိုင်းညွှတ်မှု)
• Gender Identity(လိင်ဝိသေသဖော်ပြချက်)
• ဆက်သွယ်ရန် (ဖုန်း (သို့) အီးမေး)
အောက်ပါမေးခွန်းများကို ပြည့်စုံစွာ ဖြေဆိုရပါမယ် -
ဒီသင်တန်းကို မည်သည့်နေရာ (သို့) မည်သူ့ဆီကနေ သိရှိခဲ့ပါသနည်း။
Colors Rainbow အဖွဲ့ကို သိပါသလား။ မည်သည့်နေရာကနေ သိရှိခဲ့ပါသနည်း။
ဘယ်လို လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရှိထားပါသနည်း။
သင်တန်းတက်ရောက်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြပေးပါ။
Colors Rainbow မှ တာဝန်ယူပေးမည့်အပိုင်းများ
သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရသည့် သင်တန်းသားများအတွက် ခရီးသွားလာစရိတ်၊ မြို့တွင်းခရီး သွားလာစရိတ်၊ တည်းခိုစရိတ်နှင့် နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာနှင့် ညစာတို့အတွက် Colors Rainbow မှ တာဝန် ယူပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို အသေးစိတ်ရေးသားပြီး Email - shinthant.crb@gmail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Email အသုံးပြုရန်အတွက် အခက်အခဲရှိသူများအနေနဲ့ Viber Number +959 402 602 911 သို့လည်း ၂၂ ရက်၊ နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးထားပြီးပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို 0979 6566 100 - ရှင်းသန့်ထံသို့ ရုံးချိန်အတွင်း (နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအတွင်း) ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ... See MoreSee Less
Colors Rainbow မှ ဖိတ်ကြားပါတယ်နော့် ... See MoreSee Less
တရားဥပ​ဒေ စိုးမိုး​ရေးအတွက်​ ​အုတ်​တစ်​ချပ်​ သဲတစ်​ပွင့်​ ပါဝင်​ကြပါစို့...
​မော်​လမြိုင်​နှင့်​ တနင်္သာရီတိုင်း မှ တရားဥပ​ဒေစိတ်​ဝင်​စားသူများ အား Legal Awareness Training ကို နိုဝင်​ဘာ ၉ရက်​​နေ့မှ ၁၃ ရက်​​နေ့ထိ ၅ ရက်​တာ သင်​တန်း​ ​ပေးခဲ့ပြီး .သင်​တန်းတွင် ​တက်​ကြွစွာ ပူး​ပေါင်းပါဝင်​ ​ဆွေး​နွေးမှုများအတွက်​ ​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါ​ကြောင်းနှင့်​ LGBT အ​ရေး .တရားမျှတမှု လိုအပ်​​နေသူများအ​ရေးကို ကူညီ​ဆောင်​ရွက်​​ပေးနိုင်​လိမ့်​မယ်​လို့ ယုံကြည်​ပါတယ်​.... ... See MoreSee Less
Colors Rainbow sharedalink. ... See MoreSee Less
Meet the Transgender Americans Who Won on Election Day | Human Rights Campaign
In an incredible turnout of pro-equality voters, Americans across the country elected at least seven out transgender people to office during yesterday’s election.
Vacancy Announcement (Development Coordinator)
Launch Ceremony of the Report: “From Victims to Agents of Change”
Colors Rainbow Office
Room (304), Building (B),
Delta Plaza, Bahan Township,
Phone: +(95) 400 44 7181,
Email: clrburma@gmail.com ,
Copyright © 2017 Colors Rainbow. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.